Home > Ngwaahịa > Solar Panel (Total 24 Ngwaahịa maka Solar Panel)
Solar Panel - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
Anyị bụ ndị ọkachamara Solar Panel manufacturers & suppliers / factory from China. Ebube Solar Panel na akwa dị elu dịka obere ọnụahịa / ọnụ ala, otu n'ime Solar Panel na-eduzi ụdị aha si China, ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD .
Tag: 3.5W9V Panelite Ngwá Ọrụ , Ngwongwo Ndaghari N'uzo , Obere Igwe Mmiri nke Na-acha Nchara Igwe
Igwe anaghị agba nchara okirikiri ìhè anyanwụ lawn oriọna
Tag: Okpokoro Osimiri Laa , Okpokoro Okpokoro Osimiri Na-eme N'èzí , Obere Osisi 2LED a na-acha ọkụ ọkụ
Okpomọkụ nke 2LED na-acha ọkụ ọkụ mejupụtara ọfịs abụọ nke abụọ nke 100m polycrystalline silicon solar panel, nke nwere oke ntụgharị nke aka ruru nha 17%. The ikpe bụ igwe anaghị agba nchara nkpuchi, waterproof na mmiri-àmà, na-eguzogide na...
Solar Panel akwa si China, Direct Zụta si China na-eduga ndị nrụpụta na ọnụahịa ụlọ ọrụ dị ala. Chọta akwa Solar Panel ngwaahịa na ZHEJIANG FIZZ NEW ENERGY CO.,LTD ma nweta akwa mma Solar Panel kpọmkwem site na a pụrụ ịtụkwasị obi Chinese Solar Panel wholesalers & suppliers. Zipu ihe ị chọrọ ịchọrọ & Mee nzaghachi ozugbo.